PAPER-KUITA - China Shandong Yulong Cellulose
PAPER-KUITA Sodium carboxymethyl cellulose (CMC) ndiro zvikuru vakarongeka papermaking mumiririri. Its aqueous mhinduro ine zvivako kwazvo zvakadai semvura chengetedzo, firimu aindiumba, kudzikama, pulp internet sungano uye adhesion, izvo kuti bepa faibha nyore sungano, mhando dzose fillers vanonyanya zvakaenzana akaparadzirwa pulp uye kuvandudza zvakafanana mapepa. Kushandiswa mu Coated bepa anogona kudzora rheology pamusoro unhani uye yokupararira ruvara. The bemhapemha kwava kunyange ...
Yavaibvisa carboxymethyl cellulose ( CMC ) ndiro zvikuru vakarongeka papermaking mumiririri. Its aqueous mhinduro ine zvivako kwazvo zvakadai semvura chengetedzo, firimu aindiumba, kudzikama, pulp internet sungano uye adhesion, izvo kuti bepa faibha nyore sungano, mhando dzose fillers vanonyanya zvakaenzana akaparadzirwa pulp uye kuvandudza zvakafanana mapepa.
Kushandiswa mu Coated bepa anogona kudzora rheology pamusoro unhani uye yokupararira ruvara. The bemhapemha kwava kunyange uye kugadzikana, kuti unhani riri kumeso uye Gloss, uye ane zvakanaka firimu Anoumba pfuma.
In nedanho pamusoro sizing, simba uye kumeso bepa zvinogona akavandudzika, kuti vapfeke nemishonga, kumeso uye pose simba pabepa vowanda, ingi Absorção de Água pfuma inogona hwakavandudzika uye kudhindwa unhu harina akavandudzika.
Paper-Kugadzirwa vegiredhi CMC mienzaniso: PL-5, PL-10, PL-20, PL-30, PL60, PL100
Next: mushonga wemazino Industry